Maamulka Ganacsiga & Suuqgeynta | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Posts in category Maamulka Ganacsiga & Suuqgeynta
Hab dhaqan abaabuleed ku (OB) waa daraasadda lagu gartaa dabeecada qofka ama kooxda waa sida aay dadka isku dhexgalaan marka aay si wadareed aay u wada shaqeeynayaan. Sida caadiga ah daraasaddan waxaa laga faa’idaa in la abuuro urur ganacsi ama bulsho wax ku ool ah. Arrinta dhextaalka ah ee waxbarashasa habdhaqanka ururka waa in hab cilmiyaysan lagu saleyn karaa maamulka iyo shaqaalaha leh aragtiyahakala duwan ee dhaqanka amaba ururada waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin khayraadka aadanaha si loo kordhiyo wax soo saarka kasoo xubnaha, kooxda ama shaqsiyan. Burburitaan ‘Habdhaqan abaabuleed: Waxaa jira noocyo kala duwan oo lagu dayan karo iyo falsafad …
Halkaan waxaan ku sheegi doonaa 5-ta astaamood ee waajibka ah in la raaco, waa haddii aad doonayso inaad noqoto maamule wanaagsan. Calaamadaha lagu garto maamulaha xun waxaa kamid ah shaqada fudud ayuu ka dhigaa shaqo adag ama xun, halka maamule fiican uu sameyn karo shaqo xun oo loo dulqaadan karo. Hadaba, sidee maamule xun ugu dhigi karnaa mid fiican. Kuwani waa shan astaamood oo muhiim ah. Dabacsanaantu waa furaha koowaad Sahan lagu sameeyay shaqaalaha ayaa lagu ogaaday in ku dhawaad 40% musharaxiinta shaqooyinka caalamka ay sheegaan in jadwalka dabacsan uu ka mid yahay seddexda arrimood ee ay tixgeliyaan marka ay …
Sanadka kasta malaayiin qof oo ku kala nool adduunka dacalladiisa ayaa bilaaba ganacsiyo cusub. Dadkaasi waxyaabo badan ayay ku kala duwan yihiin. Tusaalle ahaan, waxay ku kala duwan yihiin waxa ku dhiiro-geliyey in ay yagleelaan ganacsi cusub, sida ay ahayd xaaladdoodu kahor inta aysan bilaabin ganacsiga cusub duruufaha ka hor yimaada iyo sida ay u wajahaan. Isbeddellada ku dhaca bulshada waxaa marmar sababa in dad badan iskiis u shaqeyste noqdaan, midka ugu caansan isbeddelladaasi, daraasado fara badanna lagu sameeyay ayaa ah waxa loogu yeero guur-guurka (mobility). Guurguurka oo noqon kara mid muuqda sida in lagu guuro meel oo loo …
Erayga ‘entrepreneur’ waa eray qalaad, sidaas awgeed madamaa aan doonaayo inaan eraygaan u bedelo Afsoomaali ahaan, waxaan u bedelayaa erayga ganacsadaha. Taariikh ahaan erayga ‘entrepreneur’ markii ugu horeysay oo la soo bandhigay waxay ahayd sanadkii 1755-tii waxaana soo bandhigay qoraaga Cantillon. Waxa markii horre kalmadu ahayd ‘entreprendre’ oo macnaheedu yahay “awood wax lagu beddelo” Erayga ganacsadaha ‘entrepreneur’ waxay leedahay macnayaal fara badan, marka dhinac laga fiiriiyo waa weer xanbaarsan macne qoto-dheer, asal ahaana ay qaataan dad tiro yar oo leh dabeecado gaar ah. Marka dhinaca kale laga fiiriyana qofka oo bilaaba shirkad cusub waxa loogu yeeri karaa ganacsade ‘entrepreneur. …
Hilaacyo badan ayaa qofka u muuqda marka uu bilaabaayo shirkad cusub, hillaacyadaas waxaa lagu soo aruurin karaa seddax oo kala ah, faa’ido, xorriyad dhaqaale iyo nolol fiican. “Wali lama maqal lamna arag qof maalqabeen ku noqday mushaar ama shaqaale-nimo” madamaa shaqaale-nimadu aysan dadka gaarsiin maalqabeenimo, waxaa dad badani arkaan in bilaabida shirkad cusub gaarsiin karto maalqabeenimo. Heerarka kala duwan ee nolosha ayaa ah waxyaabaha aadan adiga masuul ka ahayn balse Illaahay swc ayaa siddaas kuu gartay. Inkastoo Illaahay kuu gartay qeyb walbo ee aad kaga jirta nolosha hadana sababteedda adiga ayaa leh. Waxaa laga yabaa inaad jeceshahay inaad noqoto …
Waxaa laga yabaa inaad aqoon gaar ah u leedahay qaababka loo ganacsado. Kawaran haddii aad tahay gabar wax soo baratay oo soo dhammaysatay waxbarashadeeda sarre ee jaamacada, hadana ah hooyo guriga joogta oo caruurteeda kuriso? ama aad tahay nin wax soo bartay hadana aanan haysanin shaqo amaba haayo shaqo uusan ku qanacsaneen. Ma jiraa fursado aad ku noqon karto ganacsade ama aad ku abuuri karto fursado dhaqaalle. Qoys walbo wuxuu u baahanyahay innuu helo ilo dhaqaalle, balse haddii la waayo waxaa adkaan karayso bixinta korontada guriga, waxbarashada caruurta iwm. Qofwalbo waxaa masuuliyad ka saaran tahay innuu abuuro nolol ku …
Ganasigu waa wax-qabad kasta oo ujeedadiisu tahay soo-saaridda iyo qaybinta badeeco/alaab (goods) iyo adeeg (services). Ganacsigu wuxuu saameeyaa qayb-kasta oo nolosheenna ka mida. Kaliya ma ahan qaybinta cuntada aannu cunno, dharka aannu xidhano iyo gaadiidka aannu u raacno Iskuulada, Jaamacadaha iyo Shaqada, ee waaba meesha ugu badan ee aannu ka helno shaqooyin iyo Mushaaraad aannu ku soo iibsanno badeecadaas iyo adeeggaas. Helitaanka Macaash fara-badan iyo qancinta rabitaanka aadanaha – waa labada ugu muhiinsan himilooyinka Ganacsiga. Staub iyo Attner oo ah khuburo ku xeel-dheer ganacsiga, una dhashay Maraykanka ayaa ganacsiga waxay ku qeexeen “Ganacsigu waa abaabul, kaas oo yoolkiisu yahay …
Buuggaan ( Gogoldhigga Ganacsiga) oo ka kooban 15 Cutub, wuxuu macluumaad guud iyo mid gaar ahba ka bixinayaa Ganacsiga. Waa buug qacda horeba kuu iftiiminaya waxa uu dhab ahaan yahay ganacsigu, isagoo si wanaagsan kuugu sharraxaya deegaanada kala duwan ee uu ganacsigu ku habboon yahay. Wuxuu faham weyn kaa siinayaa Nidaamyada dhaqaale ee qaarkood maanta dunidu ku shaqeyso, isaga oo dhanka kalana, si dhaammaystiran kaga warramaya qaybaha kala duwan ee Ururada ku lugta leh ganacsiga. Wuxuu aad kaaga haqab-tirayaa Suuq-geynta, Isku darka suuq-geynta, Jumlada, Tafaariikhda, Ganacsiga caalamiga ah iyo weliba haayadaha caalamiga ah ee ku lugta leh, isagoo geesta …
Shirkadaha Ganacsiga waxay isticmaalaan khayraadyo kala duwan si ay usoo saaraan Alaabo, ama ay u bixyaan Adeegyo. Tusaale ahaan shirkadaha ganacsiga waxa ay isticmaalaan alaabo ceyriin ah ( aa wali diyaarsanayn), dhismaha ganacsiga ama shirkada, qalab, mashiino iyo Dad. Ganacsiga waxa uu inta badan xooga lagu saaraa sida ugu wanaagsan oo u isticmaali lahaa qayraadka iyo shaqaaalaha u shaqeeya. Shaqaalaha qof waliba waxa uu ku taqasusay shaqo gaar ah waana sida ugu wanaagsan ee loo baahanyahay in qof waliba loo dhiibo meesha iyo shaqada uu ku fiicanyahay si loosoo saaro waxsaoosaar tayo leh. Hadaba waxaan muhiim ah in aan …